amin’ny endrika angano azon’ny ankizy mihoatra ny 10 taona rehetra vakiana. Omaly no nampahafantarina tamim-pomba ofisialy ny fisian’ny boky tetsy amin’ny tranombokim-pirenena Anosy. Barea no anarana nampitondraina izany noho ny fahatsapan’ity renim-pianakaviana iray ity fa manan-danja ho an’ny tantaram-pirenena loatra ny zava-bitan’ny ekipam-pirenena Barea. Na dia teo aza ny aingam-panahy sy ny fikirizana tao anatiny te-hamoaka izany tamin’ny mpiarabelona dia nanana olana ara-bola izy. Maro ireo olona efa natoniny mba hanampy azy saingy tsy nisy nanome avokoa. Ny vondrona Filatex irery ihany izay efa mpanao asa soa no nanampy azy tamin’ny fanatontosana ny boky. Ankoatra ireo karazana angano voarakitra ao anatin’ity boky ity dia anisan’ny hasongadin’ny mpanoratra ihany koa ny kolontsaina Malagasy amin’ny alalan’ny maha zava-dehibe ny fananantsika ny omby mba ho fantatry ny taranaka faramandimby. 5.000 Ar no vidin’ny boky.